स्रोत नखुलेको ६१ करोड रुपैयाँको विषयमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग लिएको यो विशेष भिडियो अन्तर्वार्ता
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १९:३५
काठमाडौं ।प्रणामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको खातामा स्रोत नखुलेको ६१ करोड रुपैयाँजम्मा भएको विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । तर, शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको प्रपोगाण्डाको रुपमा यसलाई अर्थ्याए ।
स्रोत नखुलेको ६१ करोड भेटिएको र त्यसबारे अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्न थालेपछि उनले आफूसँग स्रोत नखुलेको रकम नै नरहेको जिकीर गरे । उता सहकारीले पनि उनको खातामा रकम नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
आखिरी किन उनीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो ? हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने उखान रटेका नेपालीले उनीमाथि लागेको आरोपलाई कसरी लिने ? आफूमाथि लागेको आरोप निराधार र चरित्र हत्या गर्न गरिएको प्रपञ्च बताउने पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग यस आरोपलाई खण्डन गर्न के के छन् आधार? राजनीतिमा तरंग ल्याएको यस विषयमा क्यानडानेपालका सन्ताेष निराैलालेले भिडियो अन्तर्वार्ता लिएका छन् । हेरौँ सोही भिडियो अन्तर्वार्ता :